The Irrawaddy's Blog: မြန်မာပြည်ရဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပေးစာ
မြန်မာပြည်ရဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပေးစာ
နိုင်ငံတော်၏ ထာဝရအကျိုးစီးပွား ကာကွယ်ရေးအရှိန်အဟုန်နှင့် ပြောင်းလဲနေသော ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ တွင် အများယူဆသကဲ့သို့ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ပြောင်းလဲနေခြင်း၊ လမ်းကြောင်းမှန်သို့ သွားနေခြင်း မဟုတ်
သေးဟု ယူဆစရာ အကြောင်းများစွာ ထွက်ပေါ် လာနေပါသည်။
ယခင်အစိုးရလက်ထက် ရေးထိုးထားခဲ့သော မြစ်ဆုံစီမံကိန်း၊ ကြေးနီတောင်စီမံကိန်း များမှာ ယခုအခါ အငြင်းပွားစရာ၊ အများပြည်သူ အာရုံစိုက်စရာ ဖြစ်လာသကဲ့သို့ လက်ရှိအစိုးရ လက်ထက်တွင် လက် မှတ် ရေး ထိုး လတ္တံသော စီမံကိန်းများမှာလည်း ပွင့်လင်းမြင်သာသည့် အခြေအနေ မရှိသေးပါသဖြင့် အများပြည်သူများ အနေနှင့် အာရုံစိုက် လေ့လာရန် လိုအပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ယခုလက်ရှိအစိုးရလက်ထက်တွင် ရေးထိုးမည့် စာချုပ်များတွင် မှားယွင်းမှု့များ ပါဝင်ပါက၊ နိုင်ငံအတွက် နစ်နာ ပါက၊ ပိုမို၍ပြင်ဆင်ရခက်ခဲမည် ဖြစ်ပါသည်။
နိုင်ငံတော်အနေနှင့် ရေရှည်တွင် ကြီးစွာ အကျိုး သက်ရောက်မှု့ ရှိနိုင်သည့် လက်မှတ် ရေးထိုး လတ္တံသော စီမံကိန်းများမှာလည်း အများပြည်သူများ၊ ထိုလုပ်ငန်း နယ်ပယ် အသီးသီးတွင် ကျွမ်းကျင်ကြသော ပညာ ရှင်များ၊ မီဒီယာများ၊ နိုင်ငံသားများ အနေနှင့် စောင့်ကြည့်ရန် လိုအပ်ပေမည်။ သို့မှသာ မိမိတို့၏ အနာဂါတ် မျိုးဆက်များ အပေါ်တွင် တာဝန်ကျေမည် ဖြစ်ပါသည်။
မီဒီယာများ သည် ထိုအကျိုးစီးပွား အားတည့်မတ် ကာကွယ်ရန် အတွက် အဓိက တဖက်တလမ်းမှ ပါဝင်ပါသည်။
မီဒီယာများ၏ သတင်း အချက် အလက် များသည် နိုင်ငံအကျိုးစီးပွား တည်းဟူသောလမ်းမှ မလွဲ သွားအောင် တဖက်တလမ်းမှ ကာကွယ်ပေး နိုင်မည် ဖြစ်ပါသောကြောင့် မီဒီယာများ အနေနှင့် ဖြစ်ပြီးသော အကြောင်းအရာများသာမက ဖြစ်လတ္တံသော စီးပွားရေးစီမံကိန်းများကိုပါ လေ့လာ စုံစမ်း၍ ပြည်သူအား တင်ပြပေးပါက ပိုမိုပွင့်လင်းသော အနာဂတ်ဆီသို့ လျှင်မြန်စွာ တက်လှမ်းနိုင်မည် ဟုယူဆပါသည်။
မိမိတို့သိရှိပြီးဖြစ်သည့်အတိုင်း ဝန်ကြီးအများစုမှာ တပ်မတော်မှ အုပ်ချုပ်ရေးသို့ ပြောင်းလာသော စစ်ဗိုလ်ချုပ်များ ဖြစ်ပါသည်။ စစ်ဗိုလ်ချုပ်များ၏ တစ်ချက်လွှတ်အမိန့်ဖြင့် အုပ်ချုပ်ခံရသော ကျွန်တော် တို့ နိုင်ငံမှာ အဖက်ဖက်မှ နောက်ကျခဲ့ရပြီး ယခုအခါတွင်လည်း ထို စစ်ဗိုလ်ချုပ်များမှာ အသွင်ပြောင်းပြီး အုပ်ချုပ်နေသောကြောင့် ထိုအန္တရာယ်မှ လွတ်ကင်းပြီဟု မဆိုနိုင်သေးပါ။
နိုင်ငံအနေနှင့် စစ်ဗိုလ်ချုပ်များ သည်လည်း သင့်လျှော်ပါက အစိုးရအဖွဲ့တွင် ပါဝင် ထမ်းဆောင် နိုင်ပါသော် လည်း မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ အဖွဲ့တွင် စစ်ဗိုလ်ချုပ်များသာ ကြီးစိုးနေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။
ဤနေရာတွင် လက်ရှိ အစိုးရအတွင်း ၌ နောင်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြန်လည် အရွေးခံရမည် မဟုတ်ဟု ခန့်မှန်း၍ ရရှိနေသော အာဏာကို အသုံးချပြီး ရသမျှ စီးပွား ရှာလိုသူများ၊ ယခင် စနစ်၏အလေ့အထ အတိုင်း တစ်ချက်လွှတ် အမိန့်ဖြင့် ဆက်လက် ဆောင်ရွက် လိုသူများ၏ အန္တရာယ်ကို နိုင်ငံသားတိုင်း၊ အထူးသဖြင့် မီဒီယာများမှ စောင့်ကြည့်ရန် လိုအပ်ပါမည်။
နိုင်ငံအနေနှင့် ဆင်းရဲမွဲတေမှု့လျှော့ချရန် နိုင်ငံသားများအတွက် အလုပ်အကိုင်နှင့်ြွကယ်ဝချမ်းသာမှု့ကို တည်ဆောက်ပေးရန်မှာ သဘာဝသယံဇာတ များကိုသာ မှီခို၍ မရဘဲ စက်မှု့လက်မှု့ လုပ်ငန်းများ၊ ကုန်ထုပ်လုပ်ငန်းများ၊ ဝန်ဆောင်မှု့လုပ်ငန်းများ ဖွံဖြိုး တိုးတက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ထို့အပြင် အများစောင့်စားနေကြသည့် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု့ သည်လည်း နိုင်ငံကို အရှိန်အဟုန်နှင့် တိုးတက်စေရန် အတွက် တွန်းအားဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု့ သည် နိုင်ငံအတွက် နှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူ အတွက်ပါ အကျိုးရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံသူ များအနေနှင့် လုပ်သာ ကိုင်သာ ရှိရန် လိုအပ်သကဲ့သို့ မိမိတို့နိုင်ငံအပေါ်တွင် ရေရှည်တွင် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမဖြစ်ရန် လိုအပ်ပါ သည်။
အထူးသဖြင့် နိုင်ငံခြားမှ ရင်းနှီးမြုပ်နှံ၍ နိုင်ငံအတွင်း ရောင်းချမည့် ဖြန့်ဖြူးမည့် လုပ်ငန်းများကို အထူးစီစစ် သင့်ပါသည်။ ထိုလုပ်ငန်းများသည် ရေရှည်တွင် မိမိတို့ ပြည်သူများ၏ ငွေကို ပွန်းစားသွားစေမည် ဖြစ်ပါသည်။
နိဂုံးအနေနှင့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု့ မည်မျှပင် ဝင်ရောက်စေကာမူ မိမိတို့ ခွန်အားထုတ် ကြိုးစားမှသာ မိမိတို့နိုင်ငံ၏ ထာဝရအကျိုးစီးပွားကို တည်ဆောက် နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။လျှပ်စစ်ဓါတ်အား စီမံကိန်း များ၏ ရေရှည်အကျိုး သက်ရောက်မှု့ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏ နိုင်ငံကို တည်ထောင်ရာတွင် အကြီးဆုံး အဟန့် အတား တစ်ခုမှာ လျှပ်စစ် ဓါတ်အား မလုံလောက်မှု့ပင်ဖြစ်ပါသည်။
လျှပ်စစ် ဓါတ်အား မရရှိဘဲ စက်မှု့လက်မှု့ လုပ်ငန်းများ၊ ကုန်ထုတ် လုပ်ငန်းများ၊ ဝန်ဆောင်မှု့ လုပ်ငန်းများ သာမက နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု့များ အတွက်ပါ နောက်ပြန် ဆွဲခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။
သို့ပါ၍ နိုင်ငံတော်မှ ပြည်တွင်း ပြည်ပမှ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု့ များကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး ဓါတ်အားပေး စက်ရုံများ တည်ဆောက်ရန် ပြင်ဆင် လျှက်ရှိပါသည်။
လက်ရှိအခြေအနေတွင် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု့ ဖြင့်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများမှ အကျိုးရှိမည် မှန်သော်လည်း ရေရှည်တွင် မိမိတို့ နိုင်ငံမှ ပေးဆပ်ရမည် လည်းရှိပါသည်။
နမူနာ စီမံကိန်းတစ်ခု၏ အကျိုးစီးပွား ကိုလေ့လာခြင်း အနေနှင့်ြဥဗ လက်မှတ် ရေးထိုးပြီး ဖြစ်သော ရန်ကုန်မြို့၊ သာကေတ တွင်တည်ဆောက်မည့် ဓါတ်အားပေးစက်ရုံ ၏ အချက်အလက်များနှင့် တင်ပြပါမည်။
ဓါတ်အားပေးစက်ရုံအချက်အလက် နှင့် အကြမ်းသဘောတူညီချက်များ
အကြောင်းအရာ တန်ဘိုး ယူနစ်
စက်တပ်ဆင်အား ၅၀ဝ မီဂါဝပ် တစ်နှစ်ထုပ်လုပ်ပေးနိုင်သော ဓါတ်အား ၄၃၀ဝ ကီလိုဝပ်နာရီ သန်းပေါင်း အနည်းဆုံးဝယ်ယူမည့် ဓါတ်အား ရာခိုင်နှုန်း ၈၀ %
နိုင်ငံတော်မှ တစ်နှစ်ဝယ်ယူရမည့် အနည်းဆုံး ဓါတ်အား ကီလိုဝပ်နာရီ သန်းပေါင်း ၃၅၀ဝ ၊ သက်တမ်း ၂၅ နှစ်၊
ဓါတ်အားပေးစက်ရုံသက်တမ်း ၃၀ နှစ်
အကျိုး အမြတ်ဆိုင်ရာတွက်ချက်မှု့များအကြောင်းအရာ တန်ဘိုး (အမေရိကန် ဒေါ်လာ)
ရင်နှီးမြုပ်နှံမှု တန်ဘိုး ၇၀ဝ သန်း
အဆိုပြု တစ်ကီလိုဝပ်နာရီဈေးနှုန်း ၁၃.၁၃ ဆင့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့ဝယ်ယူဈေးနှုန်း (တစ် မီလီယံဘီတီယူ) ၁၀.ဝ၀ ဒေါ်လာ တစ်ကီလိုဝပ်နာရီ ဓါတ်အား ထုပ်လုပ်ရန်အတွက် ဓါတ်ငွေ့ဘိုး ကုန်ကျစရိတ် ရ.ရ ဆင့်
နိုင်ငံတော်မှ တစ်နှစ်စာ ပေးချေရမည့်ဓါတ်အားခ ၄၆၀ သန်း၊ တစ်နှစ်ဓါတ်ငွေ့ဘိုးကုန်ကျစရိတ် ၂၇၀ သန်း
တနှစ် အကြမ်းအမြတ် ၁၉၀ သန်း
ခန့်မှန်း တနှစ် လုပ်ငန်းလည်ပတ်၊ ပြင်ဆင်စရိတ် ၂၅ သန်း
တနှစ် အသားတင်ဝင်ငွေ ၁၆၅ သန်း
သက်တမ်း၂၅ နှစ်အတွင်း နိုင်ငံတော်မှ ရနိုင်သည့် အခွန်အခများ (စုစုပေါင်း (အမှန်တကယ်ပေးဆောင်ပါက) ၁၃၀ဝ သန်း
သက်တမ်း ၂၅ နှစ်အတွင်း နိုင်ငံတွင်းမှ ယူဆောင် သွားမည့်ငွေ = (၁၆၅ ထ ၂၅) - ၇၀ဝ - ၁၃၀ဝ ၂၁၂၅ သန်း
အရင်းကြေကာလ (ငွေကြေး အတိုးနှုန်း မပါ) ၅ နှစ်
ဤနေရာတွင် မိမိတို့သိရှိထားသင့်သည်မှာ အထက်ပါ စက်ရုံအတွက် တစ်ကီလိုဝပ်နာရီ ဈေးနှုန်း ၁ ဆင့် ကွာခြားမည်ဆိုပါက နှစ်စဉ် တစ်နှစ်လျှင် ၃၅ သန်း ကွာခြားမည် ဖြစ်ပါသည်။
နိုင်ငံခြားမှ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူ အနေနှင့် သန်း ရဝ၀ ယူလာမည် ဖြစ်ပြီး စီမံကိန်း သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသည့်အခါ ၄င်းတို့အနေနှင့် အရင်းနှုတ်ပြီး၊ စရိတ် လစာ ကုန်ကျစရိတ် နှုတ်ပြီး၊ အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း ၂၁၂၅ (၂ ဘီလီယံကျော်) ပြန်လည်သယ်ယူ သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ထိုငွေများမှာ မိမိတို့၏ ပြည်သူများမှ တနည်းနည်းနှင့် ပေးဆပ်ရမည့် ငွေများသာ ဖြစ်ပါသည်။အထက်ပါ တွက်ချက်ခြင်းအရ ဤသဘာဝဓါတ်ငွေ့သုံး ဓါတ်အားပေးစက်ရုံ များသာမက လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးသော အခြား ဓါတ်အားပေးစက်ရုံ စီမံကိန်းများ၏ ဆိုးကျိုး၊ ကောင်းကျိုးများကို သေချာစွာ သုံးသပ်သင့်ကြောင်း၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု့ ရှိသင့်ကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ နိုင်ငံ၏ ရေရှည် အကျိုးကိုမျှော်၍ တင်ပြအပ်ပါသည်။
အဂတိလိုက်စားမှု့တွင် သရဖူရ လျှပ်စစ်ဌာန (၁)နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအား ဖွံဖြိုးတိုးတက်စေရန် လျှပ်စစ် ဓါတ်အားသည် အဓိက အခန်း ကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားဖြင့် လောကနိဗ္ဗန်ကို တည်ဆောက်အံ့ ဟူသော လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာန ၏ဆောင်ပုဒ်မှာ လျှပ်စစ်၏ အရေးပါပုံကို ထင်ဟပ်လျှက် ရှိပါသည်။
သို့ပါသော်လည်း ဝန်ကြီးဌာန ၏ လက်ရှိ ဆောင်ရွက်နေပုံများ မှာ တိုင်းပြည်အတွက်ဟု ယူဆစရာ မပါဝင်ပါ။ တိုင်းပြည်တိုးတက်ရေးအတွက် ပြန်ပေး ဆွဲခံထားရ သကဲ့သို့ ဖြစ်နေပါသည်။နိုင်ငံအနေနှင့် ခိုင်မာ၍ရေရှည် တည်တံအကျိုးရှိမည့် စွမ်းအင်နှင့် လျှပ်စစ်မူဝါဒ ရှိရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ထို မူဝါဒ သည် ဈေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့် လျှပ်စစ်ထုပ်လုပ်နိုင်မှု၊ နိုင်ငံသားများအနေနှင့် သုံးစွဲနိုင်မှု၊ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများ တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းစေမှု့၊ နိုင်ငံအတွက် ရေရှည်အကျိုးရှိမှုတို့အပေါ်တွင် အခြေခံ ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
သာမန်အားဖြင့် ရေအားလျှပ်စစ် ထုပ်လုပ်မှု့သည် ဈေးနှုန်းသက်သာပြီး အားနည်းချက် အနေနှင့် ကျွန်ုပ်တို့
နိုင်ငံတွင် တစ်နှစ်ပတ်လုံး ထုတ်ယူ၍ မရရှိပါ။ ရေအားလျှပ်စစ် တစ်ကီလိုဝပ်နာရီ ထုတ်ယူရန်အတွက် ခန့်မှန်း ၂၀ ကျပ် (အမေရိကန် ၂.၃ ဆင့်) သာ ကျသင့်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ နိုင်ငံသားများအား တစ်ယူနစ်လျှင် ၃၅ ကျပ်ဈေးနှင့် ဖြန့်ဖြူးပေး နေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
သို့ပါသော်လည်း လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ပျောက်ဆုံးမှု့ နှင့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့မှ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုပ်လုပ်ရသည့် စရိတ် ကြီးမြင့်မှု့တို့ကြောင့် နိုင်ငံတော်မှ နှစ်စဉ် အရှုံးပေါ်နေသောလုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံ၏ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ပျောက်ဆုံးမှု့ နှုန်းမှာ ၂၅% မှ ၃၀% အတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာတွင် ထိပ်တန်း ဖြစ်နေ ပါသည်။
အကယ်၍ ယခု နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံသူ များမှ ထပ်မံတည်ဆောက်မည့် ဓါတ်အားပေးစက်ရုံများကို သေချာ စွာ မစီစစ်ပါက နိုင်ငံသားများ အနေနှင့် ရေရှည်တွင် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်လာပေမည်။ မည်သည့်အတွက်
ကြောင့် လျှပ်စစ် ဓါတ်အား ပျောက်ဆုံးမှု့တွင် ထိပ်တန်း ဖြစ်နေရသနည်း၊ နိုင်ငံသားများ အတွက် ရေရှည် တွင် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး ဖြစ်လာမည့် စီမံကိန်းများကို လျှပ်စစ်ဌာနမှ အပြေးအလွှား အကောင်အထည်ဖေါ်နေ ရသနည်း၊ ဆိုသော အကြောင်းရင်းကို စီစစ်ပါက အဂတိလိုက်စားမှု့ မြင့်မားနေခြင်းသည်လည်း အချက် တစ်ချက် ဖြစ်သည် ကိုတွေ့ရပါသည်။
ယခုနှစ် အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အစီရင် ခံစာ ထုတ်ပြန်သော အချက်အရ ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသည် အဂတိလိုက်စားရာတွင် စတုတ္ထ အဆိုးဆုံးနေရာတွင် ဖော်ပြခြင်း ခံရသည်ကို တွေ့ရပြန်ပါသည်။
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင် မူဝါဒ သည်တိုင်းပြည်အတွက် မောင်းနှင်မည့် လမ်းကြောင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ ယခု လက်ရှိ အစိုးရအနေနှင့် မူဝါဒများ ချမှတ်ရာတွင် အခက်အခဲများစွာ ရှိမည် အမှန်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် အစိုးရ၏ မူဝါဒများမှာ လက်သင့်ရာ ရှင်းနေရသည့်ပုံစံ ကိုလည်း တွေ့နေရပါသည်။
မိမိအနေနှင့် မူဝါဒကို ဆွေးနွေးတင်ပြရန် လက်လှမ်း မမှီပါသောကြောင့် မိမိသိရှိသမျှ ဌာနအခြေအနေ ကို သာ ဆွေးနွေးတင်ပြပါမည်။ မူဝါဒ နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ၏ လှုံ့ဆော် ရိုက်ခတ်မှု့ကြောင့် အဂတိလိုက်စားမှု့များ လျှပ်စစ်ဌာနကြီးတွင် မည်သို့ ပေါ်ပေါက်နေရသည်ကို ဆက်စပ်တင်ပြလိုပါသည်။
လျှပ်စစ်ဌာနတွင် အရေးပါအရာရောက်ကြသည့် နေရာများတွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်လျှက် ရှိကြသူများမှာ ထိုအရေးပါ အရာရောက်ကြသည့် နေရာကို ရရှိလာသည့် အလျှောက် ကျွမ်းကျင်မှု့ ကိုယ်စီ၊ တတ်ကျွမ်းမှု့ ကိုယ်စီရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။
သို့ပါသော်လည်း ၄င်းတို့၏အတတ်ပညာ၊ အကြံဥာဏ်များမှာ ဝန်ကြီးမှ ချုပ်ကိုင်ချယ်လှယ် နေပါသဖြင့် အသုံးချခွင့် မရရှိဘဲဖြစ် နေပါသည်။လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာန၏ ဝန်ကြီးမှာလည်း အခြေအနေ ကို ကောင်းစွာ နားလည်၍ အုပ်ချုပ်မှု့ ကျွမ်းကျင်သော တပ်မတော်မှ အရာရှိကြီးဟောင်း ဖြစ်ပါသည်။
တပ်မတော် အရာရှိကြီးဟောင်း ဖြစ်သည့် အားလျှော်စွာ အကျပ်အတည်း ကြားတွင် မည်ကဲ့သို့ အကောင်း ဆုံး ဖြစ်အောင်လုပ်ရမည် အမြတ် ထုတ်ရမည်ကို ကျွမ်းကျင် နားလည်ပါသည်။ နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး၏ လမ်း ညွှန်ချက်များ အစိုးရအဖွဲ့၏မူဝါဒနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် (လူထု) ၏တုံ့ပြန်မှု့များ အပေါ် ကောင်းစွာ အမြတ်ထုတ် နိုင်သည်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဝန်ကြီး၏ အရည်အချင်းကို သိသာနိုင်ပါသည်။
သို့ပါသော်လည်း ဝမ်းနည်းစရာ ကောင်းသည်မှာ နိုင်ငံအကျိုး တိုင်းပြည် အကျိုးအတွက်မဟုတ်ဘဲ မိမိအကျိုးကိုသာ ကြည့်သည့်အာဏာကို အသုံးချပြီး ရသမျှစီးပွားရှာလိုသူ၊ ယခင် စနစ်၏ အလေ့အထ အတိုင်း တစ်ချက်လွှတ် အမိန့်ဖြင့် ဆက်လက် ဆောင်ရွက် လိုသူ ဝန်ကြီး အမျိုးအစား ဖြစ်နေခြင်းပင်။
လျှပ်စစ် ဝန်ကြီး မည်မျှပါးနပ်၍ လိုရာလုပ်ဆောင်နိုင်သည်၊ အကွက်ချ စီမံ တတ်သည်ကို အောက်ပါ အတိုင်း ဖေါ်ပြအပ်ပါသည်။၂၀၁၁ ခုနှစ် အမှတ်(၂) လျှပ်စစ် ဝန်ကြီးရာထူး လွှဲယူပြီးသည့်အချိန်မှစ၍ ဝန်ထမ်းများအား နိုင်ငံအကျိုး တိုင်ပြည်အကျိုးဆောင်ရွက်ကြရန် ထပ်တလဲလဲမှာပြီး မည်သည့် အလုပ်မှ မလုပ်ဘဲ အခြေအနေ ကြည့်နေသည်မှာ တစ်နှစ်ခန့်ကုန်သွားပါသည်။
အစဉ်အမြဲအနေနှင့် မိမိမှာ ပညာရှင်မဟုတ်သောကြောင့် ပညာရှင်ဖြစ်သည့် ဒုဝန်ကြီးမှ ဦးဆောင် ဦးရွက်ပြု ဆောင်ရွက်ရန် လူရှေ့သူရှေ့တွင် နေရာပေးအလေးထားသကဲ့သို့ ပြောဆိုပြီး၊ ဒုဝန်ကြီးမှ တင်ပြလာပါက ချောင်ထိုးထားပါသည်။ ထို့အတူ အမြဲတစေ အရေးပေး သလိုပြောဆိုပြီး တင်ပြလာ သမျှ ချောင်ထိုးထားခံရပါသည်။
ပထမဆုံး အနေနှင့် မော်လမြိုင်မြို့ဓါတ်အားပေးစက်ရုံမှ ဘိုင်လာ ပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ဝန်ထမ်းများကို အချက်ပေးလိုက်ပါတော့သည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ မော်လမြိုင်မြို့ ဓါတ်အားပေးစက်ရုံမှ ဘိုင်လာ ပြင်ဆင်ခြင်းအတွက် တင်ဒါခေါ်ယူပြီး စီစစ်သည်မှာ ၃ လခန့် ကြာမြင့်ပါသည်။
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ ဈေးနှုန်းတင်ဒါ ဖွင့်ဖောက်ပြီး အောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီများကို ဈေးဆစ်ပါ သည်။ ဈေးနှုန်း တင်ဒါ မဖွင့်မှီ ဝန်ကြီး၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် မိုးကျရွှေကိုယ် ကုမ္ပဏီ တစ်ခုကို ပါဝင်ယှဉ် ပြိုင်စေပါသည်။ မိမိဌာနတွင် ဦးဆောင် စည်းကမ်း ထိမ်းရမည့်အစား ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း အမိန့်ဖြင့် စည်းကမ်း ဖောက်ပြလိုက်ခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။
ဈေးနှုန်း တင်ဒါ ဖွင့်ဖောက် သည့်အခါ အဆိုပါ ကုမ္ပဏီ မှတင်သွင်းသည့် ဈေးနှုန်းမှာ အများဆုံးဖြစ်ပါသည်။ အချုပ်ဆိုရပါက အဆိုပါ ကုမ္ပဏီမှ ဈေးနှုန်းအများဆုံးဖြင့် တင်ဒါအောင်ပြီး မော်လမြိုင်မြို့ ဓါတ်အားပေး စက်ရုံမှ ဘိုင်လာ ပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ဝန်ကြီး၏ စောင်မမှု့ဖြင့် ရရှိ သွားပါတော့သည်။
ထိုအဖြစ်အပျက်မှစ၍ အမှတ်(၂) လျှပ်စစ် နှင့်ဆက်စပ်လျှက်ရှိသော လုပ်ငန်းရှင်များသည် ဝန်ကြီးမှတစ်ပါး ဌာနအတွင်း ၌ မည်သူမျှ ကူနိုင်မည့်သူ မရှိဆိုသည်ကို သိသွားကြပါသည်။ ဝန်ကြီးမှ အားလုံးကို ငါသာ လျှင် အဓိကဟု အချက်ပြလိုက်သည့် အခြေအနေ ပင်ဖြစ်ပါသည်။ အားလုံး သိကြသည့်အတိုင်း စီးပွားရေး သမားများမှာ ဝန်ကြီးနောက်သို့ အပြေးအလွှား ချည်းကပ်ကြရပါတော့သည်။
ဝန်ကြီးပြီးမှ ပြီးတာ ဆိုသည့်စကားသည်၊ လူတိုင်းအား ဝန်ကြီးကိုသာ ချည်းကပ်ရန် လမ်းပြ စကားဖြစ်ခဲ့ပါ သည်။
၂၀၁၂ နွေရာသီရောက်လာသောအခါ မြို့ကြီးများတွင် ဖယောင်းတိုင်ထွန်း၍ ဆန္ဒပြကြ သောအခါ ဝန်ကြီး မှာ အခွင့်ကောင်းကို လက်လွတ်မခံဘဲ အသုံးချပါတော့သည်။ အများသိရှိပြီး ဖြစ်သည့်အတိုင်း အစိုးရ မှနေ့ချင်းညချင်း အကူအညီ ပေးမလိုလို၊ စက်များ ငှားပေးမလိုလို၊ ဓါတ်အားပေးစက်ရုံ တည်မလိုလိုနှင့် အလုပ် ရှုပ်ပြပါသော်လည်း ယနေ့အထိ မည်သည့် ဌာနက မှ လျှပ်စစ် အတွက် အကောင်အထည် မဖေါ်နိုင်ပါ။
အမှန်တကယ် လုပ်သွားသည်မှာ ဝန်ကြီးနှင့်ရင်းနှီးသော ကုမ္ပဏီ တစ်ခုမှ ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာ ၄ လုံးအား အရံမီးစက်အဖြစ် မြို့ကြီးများတွင်သုံးရန် ဝယ်ယူခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၁၆၅၀ ကီလိုဝပ် ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာ တစ်လုံး တန်ဘိုးမှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ လေးသိန်း ဝန်းကျင်ခန့်ရှိပြီး ဝန် ကြီး၏ တစ်ချက်လွှတ်အမိန့်ဖြင့် အရေးပေါ် အခြေအနေ (ဖယောင်းတိုင်ထွန်း ၍ ဆန္ဒပြပွဲ) ကြောင့် တင်ဒါမခေါ်ဘဲ ဝယ်ယူသည်မှာ ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာ တစ်လုံးလျှင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ တစ်သန်းခန့် ကုန်ကျ ပါတော့သည်။
ထို ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာ ဘိုးအား နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးသို့ တင်မတောင်းရဲ သောကြောင့် လအတော်ကြာ တင်လိုက် ချလိုက်ဖြင့် ဖြစ်နေသဖြင့် လျှပ်စစ် ဝန်ထမ်းများမှ ကြိတ်၍ ဟာသမြောက် ခဲ့ရ ပါသေးသည်။ ဝန်ကြီး၏ အခြေအနေကို လိုက်၍ ကိုယ်ကျိုး အသုံးချနိုင်စွမ်းမှာ အံမခန်းပင် ဖြစ်ပါသည်။
အများပြည်သူနှင့် သမ္မတကြီးကွိုန နှင့်အာရုံလွှဲထားပြီး အသေးသုံး အနေနှင့် ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာ လေးလုံး ဝယ်ပြီး၊ ဆန္ဒပြမှု့များကို မိုး ရွာသောကြောင့် ရေအား လျှပ်စစ် များမှ ဓါတ်အား ရရှိ၍ ထိုနှစ်အ တွက် ဖြေရှင်းပြီး ဖြစ်ပါတော့သည်။
ထိုအတော အတွင်း၌ပင် ရေရှည် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ရရှိရေး အကြောင်းပြ၍ သဘာဝဓါတ်ငွေ့သုံး ဓါတ်အားပေး စက်ရုံများကို ဝန်ကြီးနှင့် ရင်းနှီးသော ကုမ္ပဏီများ ချဉ်းကပ် ဝင်ရောက် ထားသော ကုမ္ပဏီများဖြင့် ဝန်ကြီး၏တစ်ချက်လွှတ်အမိန့်ဖြင့် မနားတမ်း လက်မှတ်ရေးထိုးပါတော့သည်။
အများစုသော လက်မှတ်များမှာ ဌာန၏ ပညာရှင် ဝန်ထမ်းများ၏ သုံးသပ်ချက် အကြံပြုချက်များ မပါဘဲ ရေးထိုးခဲ့ ရပါသည်။ အပြောင်မြောက်ဆုံး အချက်မှာမှာ ယိုးဒယားသို့ အလည်သွားစဉ် ထုံးတမ်း အစဉ်အလာ မဟုတ်ပါဘဲ ဝန်ကြီး၏ အမိန့်ဖြင့် နိုင်ငံအတွက် ရေရှည် ထိခိုက်နိုင်သည့် ဓါတ်အားပေးစက်ရုံ ကိစ္စကို အခြားနိုင်ငံ မြေပေါ်တွင် နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီ တစ်ခုဖြင့် ဖြစ်သလို ရေး ထိုးခဲ့ရပါသည်။
ကျွန်ုပ်အနေ နှင့် လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးအား နိုင်ငံအကျိုးကို ဆောင်ရွက်နေသူ တာဝန် ထမ်းဆောင်နေသူ အဖြစ် မမြင်နိုင်တော့ဘဲ ရရှိသည့်အချိန်တွင် နိုင်ငံအား လက်ညှိုးထိုး ၍ ရောင်းစားမည့်သူ အဖြစ်သာ မြင်မိ ပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။
အဂတိလိုက်စားမှုတွင် သရဖူရ လျှပ်စစ်ဌာန (၂)၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ဖယောင်းတိုင်ထွန်း ၍ ဆန္ဒပြမှု့များအပြီး ၂၀၁၃ အတွက် ဝန်ကြီးမှ အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပုံများကို ထပ်မံတင်ပြပါဦးမည်။
သဘာဝဓါတ်ငွေ့သုံး ဓါတ်အားပေးစက်ရုံများသည် နွေအခါတွင် မြို့ကြီးများအား ဓါတ်အား ပေးနိုင်ရန် အဓိက အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ပါသည်။ သို့ပါ ၍ သဘာဝဓါတ်ငွေ့သုံး ဓါတ်အားပေး စက်ရုံများ ပြင်ဆင်ခြင်းကို ဌာနမှ ဝန်ထမ်းများဖြင့် နှစ်စဉ် ဆောင်ရွက်လျှက် ရှိပါသည်။
ယခင်နှစ်များက ပုံမှန်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသော်လည်း ယခုနှစ်တွင် ဌာနမှပြင်ဆင်ရန် ခွင့်မပြုခဲ့ပါ။ ယခုနှစ်တွင် ဝန်ကြီးမှ နွေရာသီ ဖယောင်းတိုင် မထွန်းရရေး အကြောင်းပြ၍ အခွင့်အလမ်း ကြီး တစ်ခုအား ဖန်တီး ပါတော့သည်။
အလုံနှင့်လှော်ကား သဘာဝဓါတ်ငွေ့သုံး ဓါတ်အားပေး စက်ရုံများ ကို ပြင်ဆင်ရန်အတွက် ကုမ္ပဏီ နှစ်ခု အား တင်ဒါမခေါ်ဘဲ ပေးရန် ပြင်ဆင် ပါတော့သည်။ ၂၀၁၂ စက်တင်္ဘာလအတွင်း ကုမ္ပဏီများ ကို ခေါ်ယူ၍ နွေရာသီအမှီ မီးပေးနိုင်ရန် အကြောင်းပြပြီး ထို ကုမ္ပဏီ နှစ်ခုအား ပြိုင်ဘက်မရှိ လုပ်ငန်း အပ်နှံမည် ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားပါသည်။
ထို ကုမ္ပဏီ နှစ်ခုမှာ ဗြဥဠဗ ကုမ္ပဏီ နှင့်ျွှြ ကုမ္ပဏီ တို့ဖြစ်ပါသည်။ ဝန်ထမ်းများနှင့် နှစ်စ မိုးတွင်းကာလ တည်းကပြင်ဆင်ပါက စက်ရုံတစ်ရုံလျှင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ သုံးသန်း ခန့်ကုန်ကျမည်ဖြစ်ပြီး ကုမ္ပဏီ တစ်ခုလျှင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ဆယ်သန်းကျော် ဖြင့် အပ်နှံခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ထို့အပြင် ဤမျှ တန်ဘိုးကြီး ပေးထား၍ သက်တမ်းအာမခံမှာ တစ်နှစ်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအသိပေးသည့် ပွဲတွင် ဝိုင်းဝန်းကန့်ကွက် ကြသည့်အပြင် လွှတ်တော်ကို တိုင်မည်ဆိုသောကြောင့် ဝန်ကြီးမှ တင်ဒါ ခေါ်ယူစေခဲ့ပါ သည်။
ဤတန်ဘိုးကြီးပြီး အသေးစိတ်ပြင်ဆင်ရမည့် တင်ဒါကိုလည်း နှစ်ပတ်နှင့်ပိတ်၍၊ တင်ဒါမပိတ်မှီပင်တွင် ပေး ထားပြီး သား ကုမ္ပဏီ နှစ်ခုနှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ရန် ပြင်ဆင်စေခဲ့ပါသည်။ နောက်ဆုံးရသတင်းများအရ မည်မျှ အကုန်ခံထားသည်ဖြင့် ထွက်လာနေရာ ဝန်ကြီးမှ နှုတ်ပိတ် ရတော့မည်ဖြစ်ပါသည်။
သို့ပါ ၍ ဝန်ကြီးမှ ထိုအလုပ်ကို အထက်ပါ ကုမ္ပဏီ နှစ်ခုအား မပေးမဖြစ် ပေးရတော့မည် ဖြစ်ပြီး တင်ဒါ ဝင်ပြိုင်သူ များအနေနှင့် နှစ်သိမ့်ဆု အဖြစ် ရေနွေးငွေ့စက်များပြင်ဆင်ရန်သာ ရရှိတော့မည်ဟု ကြား သိနေရပါသည်။
အစဉ်အလာအားဖြင့် ဌာနမှသာ ပြင်ဆင်နေရာမှ ဝန်ကြီး၏ ခေါင်းစဉ်တပ် အမိအရ စီးပွားရှာမှု့ကြောင့် လာမည့်နွေရာသီတွင်ဓါတ်အား မလောက်ငှမှု့ကို ပြည်သူများ ကြုံတွေ့နိုင်ပါကြောင်း။
အကယ်၍ ရေအားလျှပ်စစ်ကို ဆည်ရေကုန်သည်အထိ အစွမ်းကုန်သုံးမည်ဆိုပါက ဆည်များပျက်စီး မှု ဖြစ်ပွားနိုင်ကြောင်း ကြိုတင် အသိပေး တင်ပြအပ်ပါသည်။ အသစ် တည်ဆောက်မည့် သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ သုံး ဓါတ်အားပေး စက်ရုံများနှင့် ပတ်သက်၍ တွက်ချက်ပြပြီးဖြစ်သော်လည်း၊ ဝန်ကြီး၏ ကိုယ်ကျိုးအတွက် ချယ်လှယ်မှုများကို ဆက်လက်တင်ပြပါမည်။
လျှပ်စစ်ဌာနမှ ဝန်ထမ်းများအနေနှင့် ဓါတ်အားပေးစက်ရုံ စီမံကိန်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူ များ
နှင့် အကျေအလည်ဆွေးနွေးကြပါသည်။ လျှပ်စစ်ဌာန၏ အခြားပြဿနာ တစ်ခုမှာ တပ်မတော်မှ ပြောင်း လာကြသော ဝန်ထမ်းများ ဖြစ်ပါသည်။
ထိုသူများသည် အခွင့်အရေး သာစောင့်နေပြီး အဂတိလိုက်စားမှု့မှာလည်း ထိပ်တန်း သို့ရောက်နေပါသည်။ ပညာရှင်များက နိုင်ငံ့အကျိုးအတွက် အကျေအလည် ဆွေးနွေးလိုပါသော်လည်း တပ်မတော်မှ ပြောင်း လာကြသော ဝန်ထမ်း ဌာနအကြီးအကဲမှ မင်းတို့ပေးရတာမဟုတ်ဘူး ဈေးနှုန်းသဘောတူလိုက်၊ ဝန်ကြီးမှ သဘောတူခိုင်းနေပြီ ဆိုသောကြောင့် အဆိုပြု တစ်ကီလိုဝပ်နာရီဈေးနှုန်း ၁၃.၁၃ ဆင့်ဖြင့် ပြည်သူမှ အမေရိကန် ဒေါ်လာ နှစ် ဘီလီယံ ပေးဆပ်ရမည့် အခြေအနေ ဖြစ်ပါသည်။
ပွင့်လင်းမြင်သာမှု့ အနေနှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများဘက်မှ တွက်ချက်နည်းကို တင်ပြရန် ပညာရှင်များမှ နိုင်ငံ အတွက် စီစစ်လို၍ တောင်းဆို ပါသော်လည်း မည်သည့် တွက်ချက်မှု့ကိုမျှ အသေးစိတ် ရှင်းလင်း တင်ပြမှု မပါဘဲ ဝန်ကြီးအမိန့်ဖြင့် လက်ခံခိုင်းခဲ့ပါသည်။ မည်မျှ နိုင်ငံပေါ် တာဝန်မဲ့သော ဌာနအကြီးအကဲပါလဲ၊ နိုင်ငံ အတွက်မည်မျှသစ္စာမဲ့သော ဝန်ကြီးပါလဲ။
ဌာနမှ သုံးသပ်ချက်ကို မယူ၊ ပညာရှင်များ၏ အကြံပြုချက်အား ထည့်မစဉ်းစား၊ ကိုယ့်တစ်ဘို့ တည်းသမား ဝန်ကြီး ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါသည်။ရန်ကုန်မြို့ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ရရှိရေး ခေါင်းစဉ်အောက် တွင် ရေတို ဓါတ်အားပေး စက်ရုံများ လည်းအပါအဝင်ဖြစ်ပါသည်။
လျှပ်စစ်ဓါတ်အား မြန်ဆန်စွာ ရရှိရေးအတွက် ၅၀ မီဂါဝပ် သဘာဝဓါတ်ငွေ့သုံးအင်ဂျင် များတပ်ဆင်ရန် လက်သင့်ရာ ကုမ္ပဏီများကို ပြိုင်ဘက်မရှိ ပေးလိုက်ပြန်ပါသည်။ ထို ကုမ္ပဏီများမှာ ဝန်ကြီး မဖြစ်မှီ၊ ရန်ကုန်မြို့တော် ဓါတ်အားပေး အဖွဲ့ ဥက္ကဌ ဖြစ်စဉ်က နီးစပ်ခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီများ ဖြစ်ပါသည်။
စာချုပ်ပါ အချက်အလက်များမှာ အငြင်းပွား ဘွယ်ရာများစွာ ပါရှိနေပါသော်လည်း ဝန်ကြီးအမိန့်နှင့် မည်သူ မှ မတားဆီးရဲ၊ အကြံမပြုရဲ၊ မကန့်ကွက်ရဲ ဖြစ်နေပါသည်။ စာချုပ်တွင် တစ်ကီလိုဝပ်နာရီ ထုပ်လုပ်ပေးရန် အတွက် နိုင်ငံတော်မှ ကုမ္ပဏီကို ၃.၅ ဆင့် ပေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။
သာမန်အားဖြင့် မှန်သည်ထင်ရသော်လည်း နိုင်ငံတော်မှ အနာ ချည်းသာဖြစ်ပါသည်။လှော်ကား နှင့် အလုံ ကဲ့သို့သော သဘာဝဓါတ်ငွေ့သုံး ဓါတ်အားပေး စက်ရုံများ တွင် တစ်ကီလိုဝပ်နာရီ ဓါတ်အား ထုပ်လုပ်ရန် အတွက် ခန့်မှန်း ဓါတ်ငွေ့ဘိုး ကုန်ကျ စရိတ် မှာ ၈ မှ ၁၀ ဆင့် အတွင်း ကုန်ကျမည် ဖြစ်ပြီး ခန့်မှန်း ထုပ် လုပ် ခမှာ ၃ မှ ၄ ဆင့် အတွင်း ကုန်ကျမည် ဖြစ်ပါသည်။
စုစုပေါင်းအနေနှင့် တစ်ကီလိုဝပ်နာရီ ဓါတ်အား ထုပ်လုပ်ရန် အတွက် ၁၁ မှ ၁၄ ဆင့် အတွင်းသာ ကုန်ကျပါမည်။ သဘာဝဓါတ်ငွေ့သုံး အင်ဂျင်များ၏ စက်စွမ်းရည်မှာမူ အလွန် နိမ့်ကျပါသည်။ သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့သုံး အင်ဂျင်များဖြင့် ထုပ်လုပ်ပါက တစ်ကီလိုဝပ်နာရီ ဓါတ်အား ထုပ်လုပ်ရန် အတွက် ဓါတ်ငွေ့ဘိုး ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ် ၁၄ မှ ၂၀ ဆင့် အထိ ကုန်ကျ နိုင်ပါသည်။
စုစုပေါင်း အနေနှင့် တစ်ကီလိုဝပ်နာရီ ဓါတ်အား ထုပ်လုပ်ရန်အတွက် ၁၇.၅ မှ ၂၃.၅ ဆင့် အတွင်း ကုန်ကျပါမည်။ ဝန်ကြီး၏ခေါင်းစဉ်တပ် အမြတ်ထုတ်သည့် အလုပ်မှာ တိုင်းပြည် အတွက် အလွန် နစ်နာပါသည်။
မည်သူမျှ ဓါတ်အားခ ပိုပေးစရာ မလိုသော်လည်း တိုင်းပြည်၏ ဘဏ္ဍာ ယိုဖိတ်နေသည်ကို အများသိရှိ၍ တားဆီးနိုင်ရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။ ဝန်ကြီး၏ အခြားကျွမ်းကျင် ရာအလုပ်မှာ သမ္မတကြီး အား ခေါင်းစဉ် တပ်ခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ အလုပ်တော်တော်များများအား မိမိဘာသာ စတင်၍ မလုပ်ဘဲ၊ သမ္မတကြီး ၏ ညွှန်ကြားချက်ကို ခုတုံးလုပ်ပြီး ကျွဲကူးရေပါ ကိုယ်ရောင်ဖျောက်၍ ကိုယ်ကျိုးရှာခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။
အမြဲတစေ သမ္မတကြီးခိုင်းသည့် အတွက်ဟုပြောကာ ပညာရှင်များ၏ အကြံပြုချက်၊ သုံးသပ်ချက် များ ကို လှစ်လျူရှု့ ပြီး လုပ်ချင်ရာများကို အမိန့်နှင့်လုပ်ဆောင် နေဆဲဖြစ်ပါသည်။သဘာဝဓါတ်ငွေ့သုံး ဓါတ် အားပေး စက်ရုံရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု့များတွင် ဦးကြိုင်သန်းရွှေ ပါဝင် လာပြီး သထုံနှင့် မော်လမြိုင်မြို့များ အတွက်ြဥ့ ထိုးပြီးကြောင်း၊ ဝန်ကြီးမှာ ဦးသန်းရွှေ၏ လူရင်းတစ်ဦးဖြစ်၍၊ မပြုတ်နိုင်ဘဲ ရာထူးတိုးကာ လျှပ်စစ် နှစ် ခုပေါင်း ဝန်ကြီးဖြစ်လာပြီး ထင်သလို စီးပွားရှာကာ တိုင်းပြည်၏ အနာဂါတ်ကို ရောင်းစား နေ သူ ဖြစ်ကြောင်း ကြားရသိရ ပါသည်။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော် ဝန်ကြီး၏ တစ်ချက်လွှတ်အာဏာ နှင့် အုပ်ချုပ်၍၊ ပညာရှင်များ မည်သို့မျှ မလွန်ဆန်နိုင်ဘဲ၊ အလွှာပေါင်းစုံတွင် အဂတိလိုက်စားမှု့ မြင့်မားနေဆဲဖြစ်သော လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာန နှင့် လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးကို အများပြည်သူများ၊ နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် ကျွမ်းကျင်ကြသော ပညာရှင်များ၊ မီဒီယာ များမှ မပြတ် စောင့်ကြည့်သင့်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ အနာဂါတ် မျိုးဆက်များအတွက် အကူအညီတောင်းခံ တင်ပြအပ်ပါသည်။
ဟုတ်ပါတယ်။ လျှပ်စစ်ဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်စိုးကို အရေးယူပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။ အသုံးမဝင်သော (အသုံးဝင်မှုအင်မတန်နည်းသော) မီးစက်များကို ဂန်ဂူးကုမ္ပဏီမှ ဦးဇေယျသူရမွန်ထံမှ လူတွေ ဖယောင်းတိုင်ထွန်းဆန္ဒပြတာကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး တန်ဒါမခေါ်ပဲ မတန်တဆဈေးဖြင့် ဝယ်ယူခြင်း၊
တိုင်းပြည်အတွက် ရေရှည်မှာ စီးပွားရေးအရ လက်ပံတောင်းတောင်ဖြစ်လာမည့် ဂက်စ်အင်ဂျင်လေးများဖြင့် လည်ပတ်မည့် MSP ကုမ္ပဏီနှင့် ဇေယျကုမ္ပဏီတို့ဖြင့်ပြုလုပ်မည့် ရွာမနှင့် လှော်ခါးဓာတ်အားပေးစက်ရုံ လုပ်ငန်းကို တိုင်းပြည်ရေရှည်မှာ ဆုံးရှုံးမည်ကိုသိလျက်နှင့် ကိုယ်ကျိုးစီးပွားအတွက် ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်း၊ စသည် စသည် မြောက်များလှစွာသော တိုင်းပြည်နစ်နာစေသော အဂတိလိုက်စားခြင်းများ အတွက်အရေးယူပေးပါရန် တောင်းဆိုပါ၏။ ဆက်လက်ရေးသားပါက အင်မတန် ရှည်လျားမည်ဖြစ်သာကြောင့် ဤအမှုများသာ တင်ပြအပ်ပါသည်။
ယခုလိုတင်ပြပေးသော စာရေးသူကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်။ လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးအကြောင်းကိုတော့ သိရပါပြီ။ အခြားသောဝန်ကြီးများ၏ ဂွင်ရှာပုံ များကိုလည်း နိုင်ငံအကျိုးကို မျှော်ကိုးကာ အတွင်းသိသူများက ရေးသားတင်ပြပေးစေလိုပါသည်။
အလုံနှင့်လှော်ကား အကြီးစားပြင်ဆင်မှုအတွက် တင်ဒါခေါ်ထားပြီး တင်ဒါ Process မပြီးခင် NANOVA Co., နှင့် GQM Co.,တို့အား စာချုပ်ချုပ်ရန်ပြင်ဆင်ခိုင်းခြင်းမှာ ယခုလက်ရှိ Foreign Investment ပြုလုပ်မည့် နိုင်ငံတကာ ကုမ္ပဏီများအား နောက်တွန့်သွားမည့် ခြေလှမ်းများဖြစ်သွားမည်ကို ၀န်ကြီးအပါအ၀င် အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် နားလည်သင့်ပေသည်။ ထို့ပြင်အဆိုပါစီမံကိန်းအတွက် ၀န်ကြီးဌာနမှ အခကြေးငွေဖြင့် ငှားရမ်းထားသည့် အကြံပေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် ဆွစ်ဇာလန်အခြေစိုက် Colenco အဖွဲ့အားလည်း တင်ဒါပြိုင်ထားသည့် ကုမ္ပဏီများနှင့်ပက်သက်၍ အကြံပြုတင်ပြရန် တာဝန်ပေးအပ်ထားပါသည်။ယခုအခါ Colenco မှ သဘောထားမှတ်ချက်မှာ ၀န်ကြီးဌာနသို့ပြန်လည်ပေးပို့ထားပြီး အဆိုပါ Report တွင် NANOVA နှင့် GQM ကုမ္ပဏီနှစ်ခုမှာ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ စိတ်ချယုံကြည်ရမှုအနေအထားမရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသည်ဟု ပါဝင်ပါသည်။ သို့ရာတွင်ဝန်ကြီးမှ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာတတ်ကျွမ်းနားလည်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ အကြံပြုချက်များကို လျစ်လျူရှုပြီး မိမိသဘောဖြင့်ဆောင်ရွက်ပါက မလိုလားအပ်သော နောက်ဆက်တွဲဆိုး ကျိုး များကို မိမိတို့ပြည်သူများသာ ခံစားကြရမည်ဖြစ်ပါသည်။
၄င်းဖေါ်ပြထားသော ကိစ္စတွင် ၀န်ကြီးသာမက CE နှင့် Dy CE မှာ Nanova နှင့် GQM ကုမ္ပဏီများနှင့်ပေါင်းလျှက် 25T အား Percentage ယူလုပ်ဆောင်နေသော စီမံကိန်းဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံလျှပ်စစ်ဓါတ်အား လိုအပ်ချက်ကို အကြောင်းပြပြီး မျက်ဖြူဆိုက်လေ ဆရာကြိုက်လေဆိုသလို ၄င်းတို့အကျိုးစီးပွားအတွက် အသုံးချနေပြီး ပြည်သူများသာ မွဲပြာနေပါသည်။ မလုပ်သင့် မလုပ်အပ်သော ကိစ္စဖြစ်ပြီး ဒီလိုပုံဖြင့် ရွှေပြည်တော်မျှော်တိုင်းဝေးနေပါလိမ့်မည်။
တပ်မတော်အရာရှိများ အားလုံးကို ဝါးလုံးရှည်နဲ့တော့ သိမ်းကြုံးမရမ်းသင့်ပါ။ လျှပ်စစ်ကို ဝင်လာတဲ့ တပ်မတော် အရာရှိများသည် စက်မှုတက္ကသိုလ် BOOM ဖြစ်စဉ်က အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ ရရှိခဲ့ သူများ ဖြစ်ကြပါသည်။ ပညာမတတ်တဲ့ သူများမဟုတ်ပါ။ သူတို့ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်များက လျှပ်စစ်မှာ ခြစားတိုက်ဆွေးနေတဲ့ အရပ်သားများထက် အများကြီး သာပါသည်။ အရပ်သားများလဲ ဂွင် အကြီး အကျယ် ရှာတာပါဘဲ။ သူတို့ကတော့ အလွန်ရိုးသား နေလို့လား။ ဂွင်ရှာပြီး ချမ်းသာနေတာဘဲ။ ဒုဝန်ကြီး အရပ်သားပေမဲ့ သူလဲ ဝါးတာဘဲ။ ချမ်းသာနေတာဘဲ။ လုပ်ငန်းမှာ နေနေတာသာ ကြာတာ လုပ်ငန်းသဘော သဘာဝကို နားမလည်တဲ့ သူတွေ တစ်ပုံကြီးပါ။ အပြင်ပန်းကလဲ ကြည့်မပြောသင့်၊ တစ်ဖက်သတ် အမြင်များဖြင့်လဲ မပြောသင့်ပါ။ တပ်မတော်သား အရာရှိများမှာလဲ ကောင်းသူ၊ မကောင်းသူ၊ တော်သူ၊ မတော်သူ၊ ရိုးသားသူ၊ မရိုးသားသူ ခွဲခြားပြောပါ။ အရပ်သားတွေမှာလဲ အဲလို ခွဲခြားပြောပါ။
တကယ်တမ်း စစ်တပ်က ဘာမှ မတတ်တဲ့ သူတွေ အခွင့်အရေး အတင်းဝင်ယူနေတာက မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်မှာပါ။ ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဖွဲ့ အစည်းမှာ ပညာရပ်များကို လေ့လား လိုက်စားရန် လုံးဝ စိတ်ဝင်စားမှု မရှိဘဲ နိုင်ငံခြား သွားရရေး၊ budget ပေါ် ထိုင်စားရေး၊ လုပ်နေတာ ဗဟိုဘဏ်မှာပါ။ လျှပ်စစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
စစ်တပ်က ပြောင်းလာတဲ့ အင်ဂျင်နီယာတွေက လျှပ်စစ် ဒုဝန်ကြီးထက်တောင် RII မှာ Senior ကျသေးတယ်.. သူ ဒုဝန်ကြီး ဖြစ်တာလဲ အရင် လျှပ်စစ် ဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်မြင့် ကို လာဘ်ထိုးပြီး ဖြစ် လာတာပါ.. တော်လို့ မဟုတ်ပါ.. သူကိုယ်တိုင်လဲ အရမ်းဝါးပါတယ်..
Nanova Co., မှ နိုင်ငံခြားကုမ္မဏီဖြစ်သော Warmer နှင့်၎င်း၊ GQM Co., မှ Wood Group နှင့်၎င်းတွဲဖက်၍ အလုံနှင့်လှော်ကား ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ အကြီးစားပြင်ဆင်ရန်အတွက် စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားပြီး လွှတ်တော်မှ ခွင့်မပြုသဖြင့် အဆိုပါစက်ရုံများ ပြင်ဆင်ရန် တင်ဒါခေါ်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
တင်ဒါခေါ်ယူခဲ့စဉ်ကလည်း တင်ဒါတွင် ဖော်ပြထားသော အချက်အလက်များမှာ ၄င်း ကုမ္မဏီများမှ တင်ပြထားသော အချက်အလက်များအား တိုက်ရိုက်ကူးယူ၍ ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ် သောကြောင့် Technical စစ်ဆေးလျှင် အဆိုပါ ကုမ္မဏီ (၂)ခုမှာအလိုအလျောက် အောင်မြင်နေမည်မှာ မှတ်ချမလွဲဧကန်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
ဥပမာအားဖြင့် ဖော်ပြရလျှင် တင်ဒါတွင် ဖော်ပြထားသော MEPE နှင့် Contractor တို့ လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ အပိုင်းတွင် Contractor လုပ်ဆောင်ရမည့် အပိုင်း၌ " Removal and're-fitting of Engine (Gas Turbine) enclosure blast panels. The blast panels are an integral part of the package roof that will be removed by WG. WG will not work directly on the blast panels. " ဟု၍ ဖော်ပြထားပါသည်။ WG ဆိုသည်မှာ Wood Group ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အဆိုပါ ကုမ္မဏီ (၂)ခုအား တင်ဒါ Process မပြီးခင် စာချုပ်ပြင်ဆင်ခိုင်းခြင်းမဟုတ်ပါ တင်ဒါ မထွက်ခင်ထဲကပင် စာချုပ်များ အသီးသီး ပြင်ဆင်ပြီး ဖြစ်နေကြပြီး တင်ဒါပါ အချက်အလက်များကိုလည်း ၄င်းတို့ တင်ပြထားသော အချက်အလက်များ ကူးယူ၍ တင်ဒါခေါ်ယူထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
မသိသေး တာတွေ. အများကြီး သိလိုက် ရတယ်…..
မပြေလည် ကြလို့ … ရှောက်ရမ်း တာလား…..?
ယခုလိုတင်ပြပေးသော စာရေးသူကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ရေးထားတဲ့စာရော comment တွေရော ဖတ်ရတာ တိုင်းပြည်အကျိုးအတွက် ရေးတာ မဟုတ်ဘဲ NANOVA Co., နှင့် GQM Co., ၂ခု တင်ဒါရတာကို မကျေနပ်လို့ ဒုဝန်ကြီးနှင့် အပေါင်း အပါများက ရေးသလို ပုံစံဖြစ်နေတယ်။
လျှပ်စစ်ဌာနက ဟိုးပဝေသဏီထဲက ပျက်နေတာ ကြာလှပြီ ယခု ပင်စင်ယူသွားပြီ ဖြစ်တဲ့ အရပ်သား အရာရှိကြီးများ လက်ထက်မှာ ညနေတိုင် ညနေတိုင် ရုံးမှာ တဝုန်းဝုန်း တရုန်းရုန်းနဲ့ ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးများနှင့် ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ခဲ့ကြ စားသောက် ပျော်ပါးခဲ့ကြတာတွေ မေ့မပစ်ပါနဲ့.. လျှပ်စစ်ဌာနကြီးသည် အရပ်သားများ ကြီးစိုးစဉ် ကတည်းက အကြီးအကျယ် ခြစားနေတာဖြစ်တယ်
အဲဒီ အရပ်သားများလဲ အကြီးအကျယ် ချမ်းသာ သွားကြတာပါဘဲ
သူတို့ လုပ်ချင်တာ မလုပ်ရလို့ ….စားပေါက် ပိတ်ပြီး…..
ဘေးထိုင် ဘိုင်ကျ ဘုပြော တာလား…မသိဘူး နော်……
အဆင်းဘီး တတ်ပြီး…..ဖွပေး လိုက်တာ….အ ပီဘဲ…..
မှတ်ချက်များအားလုံးကောင်းပါသည်။ စာရေးသူကော၊ command ပေးသူများမှာ လျှပ်စစ်ဌာနမှ ၀န်ထမ်းများနှင့် မိသားစုဝင်များနှင့် ဆက်စပ်မည့်သူများ ဖြစ်နှိင်ပါသည်။ :-) မကျေနပ်လို့ဖွကြရင်လည်း တည့်တာဖွပါ လျှပ်စစ်ဌာနမှမဟုတ် ၀န်ကြီးဌာနတိုင်းတွင် လေထီးစစ်သားများ ရှိပါသည်။ လေထီးစစ်သားများမှာ တပ်မတော်မှ ပင်စင်ရပြီး အရပ်ဘက်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းကြောင့် ၀န်ထမ်းအများစု မျှော်လင့်ချက်များကို ပျက်စီးစေပါသည်။ မည့်သည့်ဌာနမှ မသန့်ရှင်းပါ အ၀ားမျးခြင်းနှင့် နည်းခြင်းသာကွာပါမည်။ သူ့နေရာနှင့်သူပါ လာစာနှင့် ကုန်ဈေးနှုန်းမမျှတခြင်းမှာ အဓိကဖြစ်ပေသည်။ ပြဿနာအရင်းအမြစ်ကိုရှာဖွေပြီး ဖြေရှင်းခြင်းက ပိုမိုထိရောက် ကာကွယ်နှိင်ပေမည်။ တပ်မတော်သားနှင့် အရပ်သားမခြွဲားသင့်ပါ ပင်စင်ရပြီးရင်တော့ အပြင်အလုပ်သာ လုပ်သင့်ပါသည်။ ကိုယ့်ကြောင့်အခြားသူများအား ဝေဒနာမပေးသင့်ပါ။ မိန်မကိစ္စနှင့်ပတ်သက်လျှင်လည်း ဘယ်သူတွေက လက်စလက်နပိုပြင်းတယ်ဆိုတာ ဌာနတိုင်းသိကြပါတယ်။ အရပ်သားများပျက်ခြင်းမှ ဟိုအရင်ကတည်းက ခေါင်မိုးမလုံသောကြောင့် ယခုခတ်သီချင်းလို မင်းလည်း အိုကေ :-) :-) :-) ငါလည်းအိုကေဖြစ်နေကြခြင်းပါ။ အားလုံးကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ရမှာပါ။ ဖတ်ပေးသူများအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Share ပေးကြပါ ကြိုက်ကြရင်ပေါ့။
ဌာနက ၀န်ထမ်းလိုလို..နဲ့ ဟိုဘက်ပတ်တွယ်..ဒီဘက်ပတ်တွယ်...
တော်တော်လေး လေ့လာထားတာတော့ ချီးကျုးချင်စရာပါ....
ဒါပေမယ့် အမှန်တရားနဲ့ နီးစပ်ဖို့ကိုတော့ မိမိကိုယ်တိုင်းလည်း..လေ့လာချင်သေးတယ်...
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဥပဒေပေါင်း..ခုလောက်ဆို.. သန်း ၆၀၀၀ ကျော်ရှိနေလောက်မယ်...
အမှန်တကယ်ကလည်း...ဌာနအကြီးအကဲတွေကလည်း.ပွဲပြီး မီးသေ ဖြစ်အောင် စနစ်တကျဖြစ်သင့်တယ်..ကိုင်တွယ်သင့်တယ်...
ပြဿနာ တက်ပြီးမှ နောက်ကလိုက်ရှင်းတာမျိုးဟာ..
သေချာတာတစ်ခု က လျှပ်စစ်ဝန်ကြီး ဆိုရင် အ အော်ခံရတာ ဓမ္မတာပါပဲ..
အရင်တုန်းက (၁) ၀န်ကြီး..ကိုဇော်မင်း ရှိတုန်းက..
(၂) ၀န်ကြီးဟောင်း ကိုခင်မောင်မြင့် နဲ့...လက်ရှိဝန်ကြီး..ကိုခင်မောင်စိုးကို လူတွေသိပ်မသိကြပါဘူး...
ဒီလောက်ပါပဲ ...နောက်တော့ ကြုံရင်တွယ်...အဲလေ..ရေးဖြစ်မှာပေါ့...
ီလူကြီးများအားလုံးနူတ်ထွက်သင့်ပါသည်။ဒါမှ လူအသစ် မူအသစ်ဖြစ်လာပြီ အားလုံးကောင်သွားပါလိမ့်မည် ။ယခု လူကြီးများမှာ ၀ါးပြီးရင် ၀ါးခြင် နေခြင်သူများ လို့သာ....ဒါကြောင့် မတိုးတက်နိုင်ပါ မစွန့်လွတ်နိုင်ကြပါ
rrီလူကြီးများအားလုံးနူတ်ထွက်သင့်ပါသည်။ဒါမှ လူအသစ် မူအသစ်ဖြစ်လာပြီ အားလုံးကောင်သွားပါလိမ့်မည် ။ယခု လူကြီးများမှာ ၀ါးပြီးရင် ၀ါးခြင် နေခြင်သူများ လို့သာ....ဒါကြောင့် မတိုးတက်နိုင်ပါ မစွန့်လွတ်နိုင်ကြပါ
ယခင်ကလျှပ်စစ်(၁)၀န်ကြီး ဦးဇော်မင်းအကြောင်းသာ ပြည်သူများသိကြပြီး လျှပ်စစ်(၂)၀န်ကြီး ဦးခင်မောင်စိုးအကြောင်းမသိကြချေ။ ဦးခင်မောင်စိုးမှာ သမ္မတကြီး တပည့်အရင်းဟူသော ဂုဏ်ပုဒ်ဖြင့် သူထင်ရာလုပ်ပြီး မည်သူမျှဂရုစိုက်စရာမလိုဟူသောပုံစံဖြင့် စည်းလွတ်ဘောင်လွတ်လုပ်သသည့်သူဖြစ်ပြီး ၄င်း၏လုပ်ရပ်များက ပြည်သူအတွက် မွဲဆေးဖေါ်နေသလိုဖြစ်နေပါသည်။ သူသည် ဦးဇော်မင်းထက်ဆိုးသောသူဖြစ်ပါသည်။ သာဓက အားဖြင့် လျှပ်စစ်(၂)မှ GM တစ်ဦး၏အလှူတွင် ဒန်ပေါက်ကျွေးရာ ၀န်ကြီးဦးခင်မောင်စိုးအိမ်သို့ ၀န်ထမ်းတစ်ဦးအား ဒန်ပေါက်ပို့ခိုင်းရာ ထိုဝန်ထမ်းသည် အိမ်ရှေ့ပေါက်မှဝင်သွားသည့်အတွက် ချက်ချင်းဖြုတ်ခိုင်းပါသည်။ အားလုံးဝိုင်းတောင်းပန်မှ အဝေးဆုံးနေရာသို့ ရွှေ့ရန်ညွှန်ကြားပါသည်။ အလွန်မောက်မာသူဖြစ်ပြီး ကျွမ်းကျင်သူများဖြင့်တိုင်ပင်ခြင်းမရှိပဲ လုပ်သည့်အတွက် နိုင်ငံတော်အတွက်နစ်နာသောစီမံကိန်းများစွာရှိပါသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှ အလကားပေးမည်ဆိုသောဓါတ်အားထုတ်စက်အတွက် လွှတ်တော်တွင် ရွှေ့ပြောင်းစရိတ်အဖြစ် ဒေါ်လာ ၄၃ သန်းတင်ပြတောင်းခံခြင်းမှာ အလွှန်ရယ်စရာကောင်းပါသည်။ ဒေါ်လာ ၄၃သန်းသည် ဓါတ်အားပေးစက်ဝယ်နိုင်သည့် ပမာဏဖြစ်ပြီး ရွှေ့ပြောင်းစရိတ်အဖြစ်တောင်းခြင်းမှာ အလွန်များသော ပမာဏဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ယင်းစက်မှာ operation စရိတ်အလွန်များသော စက်ဖြစ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံမှ တွက်ချေမကိုက်သည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံအား မွဲဆေးဖေါ်ပေးလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်ပေသည်။ ယင်းကို မသိသောဝန်ကြီးမှာ ပြည်သူများ၏ငွေ ဒေါ်လာ ၄၃ သန်းကို အလွယ်ကလေးပေးချင်နေသည်။ နောက်ဆုံးတော့ အချိန်ကုန်လူပန်း ငွေကုန် အရာမရောက် ပြည်သူများသာ မွဲပြီးရင်းမွဲနေစေတော့မည့်စီမံကိန်းသာဖြစ်ပါသည်။
ထို့အပြင် တင်ဒါများတွင် ၄င်းပေးချင်သော ကုမ္ပဏီများကိုသာပေးလေ့ရှိပြီး တင်ဒါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါ။ ၄င်း၏မိတ်ဆွေဟောင်းများကိုသာတင်ဒါပေးလေ့ရှိပြီး အထူးသဖြင့် Gunkul အားပေးလေ့ရှိပါသည်။ Gunkul မလုပ်နိုင်သော စီမံကိန်းများတွင် အခြား ပေးကမ်းနိုင်သော သူများကိုပေးလေ့ရှိပါသည်။
အလုံနှင့်လှော်ကား စက်ရုံများပြင်ဆင်ရန်အတွက် အမှန်တကယ်ပြင် တင်ဒါမခေါ်ခင်ကတည်းက GQM နှင့် Warmer ကုမ္ပဏီများကို စာချုပ်ပြင်ခိုင်းထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဘောင်ဝင်ရန်တင်ဒါခေါ်ခြင်းမှာ ပြည်သူကို လိမ်လည်ခြင်း သာဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းကုမ္ပဏီနှစ်ခုသည် ၀န်ကြီး ၊ CE နှင့် Dy-CE အား အမြတ်ရှယ်ယာပေးထားပြီး စည်းရုံးထားသည်ဟု သိရှိရပါသည်။ ထို့အပြင် လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာနမှ အရာရှိကြီးများနှင့် မိသားစုများအား ၄င်းတို့ Agent ယူထားသော စင်ကာပူနိုင်ငံဆေးရုံများတွင် ဆေးစစ်ပေးခြင်း၊ ၄င်းတို့ဖွင့်ထားသော KTV များတွင် မိန်းကလေးများဖြင့် မြူဆွယ်ဧည့်ခံခြင်းများဖြင့် စည်းရုံးထားပြီး၊ အိမ်၊ ကား၊ တိုက်ခန်းများပေးကမ်းထားသဖြင့် ထိုကုမ္ပဏီများခိုင်းသမျှ လုပ်နေရပြီး တိုင်းပြည်နှင့်ပြည်သူ့အကျိုးကိုမထောက်ထားပဲ မိမိတို့အကျိုးစီးပွားသာလုပ်နေကြပါသည်။
လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာနသည် စစ်တပ်မှ အငြိမ်းစားယူလာသူအများဆုံးရှိသည့်ဝန်ကြီးဌာနဖြစ်ပြီး အပျက်စီးဆုံး စည်းကမ်းမရှိဆုံး လာဘ်အစားဆုံးဝန်ကြီးဌာနဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံခြားသွားရေးနှင့် လာဘ်ရရှိရေးသာ စိတ်ဝင်စားကြပြီး နိုင်ငံခြားသွားလျှင်လည်း လေ့လာရေးထက် မိန်းမများနှင့် အခပေးပျော်ပါးရေးကိုသာ အဓိကဖြစ်၊ ၀န်ကြီးဌာနတွင် call လာရောက်တွေ့ဆုံပါက လက်ဆောင်မပါမဖြစ်ပါမှ လက်ခံတွေ့ဆုံပြီး မပါလျှင်မျက်နှာမသာယာပါ။ ရုံးအဖွဲ့မှူးဆိုလျှင် ပေးရင်ပေး မပေးလျှင် ၀န်ကြီးထံစာဆက်တင်မပေးပါ။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရလျှင် ၀န်ကြီးဌာနတွင် ၀န်ကြီမှစ အောက်ခြေအထိ အဆင့်ဆင့်တွင် ပျက်စီးနေပြီး တော်သော ကောင်းသော တိုင်းပြည်အတွက် ပြည်သူအတွက်ကြိုးစားမည့်သူမှာ အနည်းငယ်သာရှိသည်။
ဤပုံဖြင့် ဘယ်သို့ဘယ်ပုံစခန်းသွားကြမည်နည်း။ တိုင်းပြည်အတွက်ရင်လေးလှသည်။ ထို့ကြောင့် ယခင်ကလူကြီးသူမများပြောသည့်စကားကို အမှတ်ရမိသည်။ ပညာရှိ သူတော်ကောင်းတို့ကြီးပွားလျှင် အများပြည်သူချမ်းသာပြီး ပညာမဲ့သူယုတ်မာတို့ ကောင်းစားလျှင် အများပြည်သူဒုက္ခရောက်ကြသည်တဲ့။
လျှပ်စစ်ကလူတွေမိန်းမရှုပ်တာတော့မပြောနဲ့တော့ဗျို့။ တပ်ကလာတဲ့သူရော အရပ်သားရော နိုင်ငံခြားသွားလဲဖာပဲရှာနေ၊ KTV မှာလဲမယားငယ်ယူထားသေး အချို့ဆို ရုံးထဲမှာ ကိုယ့်အောက်က ရာထူးငယ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေကို အငယ်လုပ်။ GT ဌာနမှာဆို အဆိုးဆုံးပါ။ ခွဲရုံမှာ အငယ်ထား ၊ ရုံးမှာအငယ်ထား၊ ဒါမှ ရုံးလာချင်မှာကိုးဗျ။ အလုပ်ကျတော့ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီက နည်းပညာအသစ်အဆန်းများ Presentation လာလုပ်ရင် အရှက်မရှိအိပ်ငိုက်တာများ ဟောက်သံတောင်ထွက်တယ်။
လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာနတွင် တင်ဒါခေါ်ယူပြီး Technical စစ်ဆေးရာတွင် တစ်ခါတစ်ရံ ဌာနမှစစ်ဆေးပြီး အချို့ခေါင်းရှောင်လိုသော စီမံကိန်းများကို Colenco သို့ ပေးပို့ စစ်ဆေးပါသည်။ ထိုသို့စစ်ဆေးရာတွင် အောင်စေလိုသော ကုမ္ပဏီများ၏ Document များကိုသာ အပြည့်အစုံထည့်ပေးပြီး၊ ကျန်ကုမ္ပဏီများ၏ Document များကို အရေးကြီးသော အပိုင်းများ ဖြုတ်လျှက်ပေးပ်ို့ပါသည်။ ထို့အပြင် Colenco မှာ နိုင်ငံတော်မှ အခပေးဌားရမ်းထားသော အဖွဲ့ဖြစ်သော်လည်း အချို့စီိမံကိန်းများတွင် CE နှင့် Dy-CE များမှ လိုချင်သည့်အတိုင်း Report ကိုရေးပေးရပါသည်။ အချို့နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများမှာ Colenco နှင့်လက်ဝါးရိုက်ထားပြီးအပေးအယူဖြင့်အလုပ်လုပ်ကြကြောင်း အတွင်းသိတစ်ဦးမှဆိုပါသည်။ ထို့ဖြစ်သဖြင့် နိုင်ငံတော်မှ ပြည်သူများ၏ငွေကုန်သွားသော်လည်း ယုံကြည်စိတ်ချရသည့်အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ပါ။
အချို့နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများမှာ Colenco နှင့်လက်ဝါးရိုက်ထားပြီးအပေးအယူဖြင့်အလုပ်လုပ်ကြကြောင်း တဲ့လေ........ LOL
အားမငယ်ကြနဲ့ မြန်မာပြည် တစ်ခုထဲ ဟုတ်ဘူး တစ်ကမ္ဘာလုံး အဂတိ လိုက်စားနေကြတာ ...:D
ဘယ်သူ့ကို ယုံရမှန်းကို သိတော့ဘူး...
အားလုံးပြောကြတာတွေ သူ့ဟာနဲ့သူ မှန်နေကြပါလား၊ ဝန်ကြီးကို ဝိုင်းတွယ်နေကြသူတွေကလည်းမှန်နေတယ်၊ ဝန်ကြီးဖက်က ကာကွယ်ပြောပြီး အောက်က ဒုဝန်ကြီး၊ MD, CE, DYCE နှင့် ဝန်ထမ်းအားလုံးကို အပြစ်ဖို့နေသူတွေကလည်း မှန်ပြန်တယ်၊ ကုမ္ပဏီတွေကို ဝေဖန်သူတွေကလည်း အဟုတ်၊ ကုမ္ပဏီတွေဖက်က ရှေ့နေလိုက်နေသူတွေကလည်း မှန်နေပြန်ရော၊
အဲဒီတော့ မှားနေတဲ့သူတွေက ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်နဲ့တူတယ်၊ တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဟာ ခင်ဗျားတို့ လူမှန်ကြီးတွေကြားထဲက မြန်မာနိုင်ငံမှာ မှားယွင်းစွာ လူဖြစ်လာခဲ့ရတဲ့ လူတွေပဲပေါ့နော်။ ကျွန်တော်တို့ပဲ မှားပါတယ်ခင်ဗျား။
CE နှင့် Dy-CE ဆိုတာ ဘယ်သူ့ကိုပြောတာပါလဲ ? လျှပ်စစ်မှာ CE တွေ Dy CE တွေအများကြီးပါ။ မကောင်းတဲ့သူရှိသလို ကောင်းတဲ့သူလဲရှိပါတယ်။ နာမည်သေချာပြောစေချင်ပါတယ်။ တကယ်ဆိုးတာက Finance ဌာနက ဒေါ်ဇော်ဇော်သန်းပါ။ ဌာနတွင်းဆက်ဆံတာသာမက ပြင်ပကုမ္ပဏီများနှင့်ပါ ဆက်ဆံရာတွင် အလွန်ဆိုးသောသူဖြစ်ပါတယ်။ အပြင်ဌာနများဆိုလျှင် မရလျှင်ဘာမှမလုပ်ပါ။ များများပေးမှ မြန်မြန်လုပ်ပါတယ်။ ဘာမှလည်းသေသေချာချာဂဂနနမတတ်ပါ။ ဌာနတွင်းဆိုလျှင် ဘာတာဝန်မှသူ့အပေါ်အရောက်မခံပဲ အခြားဌာနများသာတာဝန်ရှိရန်ပုတ်ထုတ်တတ်ပါသည်။ သူကဦးအောင် MD, ဒုဝန်ကြီး၊ ၀န်ကြီးထံတိုင်တန်းတတ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ သူကဲ့သို့ လာဘ်ပဲယူ၊ တာဝန်မယူလိုသူများ ဌာနတွင်မရှိသင့်ပါ။ လူခင်လျှင်မူပြင်ပြီး လူမုန်းလျှင်မူသုံးတတ်သူဖြစ်ပါတယ်။ လူခင်ဖို့ကတော့ ဘာလိုလဲဆိုတာ သိကြတယ်မလားခင်ဗျာ ။ မသိရင်တော့ ဒေါ်ဇော်ဇော်သန်းသာ မေးကြည့်ပါခင်ဗျား။ ဒါမှမဟုတ် သူ့အရှိန်နဲ့မောက်မာနေတဲ့ သူ့တူမကိုသာမေးကြည့်ကြပါခင်ဗျား.........
CE နှင့် Dy-CE တို့အခန်းမှာ Nanova ကအဖွဲ့တွေ တံခါးမရှိ ဓါးမရှိ အမြဲလာနေပြီး ခုမှဘာလို့မလာတော့တာလဲ။ ရန်ကုန်ကအိမ်မှာလည်းအရင်က အမြဲဝင်ထွက်နေပြီး လိုအပ်တာအားလုံးလုပ်ပေးနေကြပြီး CE နှင့် Dy-CE ကို နဖားကြိုးထိုးထားတာဆိုတော့ သူတို့ကြိမ်တို့တဲ့အတိုင်းလုပ်နေကြတယ်။ Nanova က GT ဌာနကိုသိမ်းထားပြီး၊ CE နှင့် Dy-CE က အရုပ်တွေဖြစ်နေကြတယ်။ အရှက်မရှိ ပြည်သူ့မျက်နှာကိုမထောက် တာဝန်နဲ့ဝတ်တရားကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်လို့သဘောထားပြီးကိုယ်ကျိုးရှာနေကြသရွေ့ တို့နိုင်ငံမတိုးတက်ဘူး။
အပေါ်ကကောင်တွေ မင်းတို့ဘယ်လောက်ပြောပြောဝန်ကြီးက သနားတယ်။ သူပိုင်လို့သူလုပ်တာ သူ့ကိုဘယ်သူမှအရေးမယူနိုင်လို့လုပ်တာ ဘယ်သူဘာပြောပြောဂရုမစိုက်ဘူး။ သူ့ကိုပြောလဲ ထိုးချဖို့ရှာထားပြီးသား။ ၀န်ကြီးက အောက်က ဒုဝန်ကြီး၊ DG ၊ MD ၊ CE၊ Dy-CE ကိုထိုးချနေကျပဲ။ CE နဲ့ Dy-CE ကလည်း အောက်က SE, EE တွေ စက်ရုံမှူးတွေထိုးချ။ လုပ်တော့အပေါ်ကလူ ။ ခံရတော့ အောက်ကလူ။ ၀န်ကြီးစီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုကြောင့် ဌာနပျက်ကြီးအလုံးစုံပျက်စီးပြီး နောက်ဆုံးမှာ တကယ်ခံရတာက ပြည်သူပြည်သားတွေ။
ရင်နာလိုက်တာကွာ။ ငါတို့နိုင်ငံမှာ လူတော်လူကောင်းတွေ ဒီလောက်ရှားလား။ ဒီလိုလူတွေမရှိရင် နိုင်ငံတော်ကြီးပိုကောင်းသွားမယ်။ တကယ်နိုင်ငံအတွက်လုပ်မယ့်လူတွေကို ပြည်သူတွေက ရွေးပေးကြပါ။ တကယ်လုပ်နိုင်မယ့်သူကို သမ္မတကြီးခန့်ပေးပါ။ ဒီလို လူဆိုးလူညစ်တွေကိုမလိုချင်ပါ။
ကျွန်တော်က လျှပ်စစ်က အရာရှိကြီးတစ်ဦးပါ။ အစကတော့ဒီကိစ္စတွေမှာ ၀င်မပါ ၀င်မပြောဘူးလို့ပဲ ။ မတရားတာမြင်လို့ မနေနိုင်လို့ပြောပါရစေ။
ဘယ်သူတွေဘာပြောပြော ၀န်ကြီးက ## ဂရုမစိုက်ဘူးလို့ လူတွေရှေ့မှာပြောပါတယ်။ ၀န်ကြီးတစ်ယောက်လုပ်နေပြီး ဒီလိုပြောသင့်ပါသလား။ Nanova ကလည်း အေးဆေးပါ။ အခု စာမချုပ်ခင်ကတည်းက လှော်ကားစက်ရုံမှာ လုပ်ငန်းတွေစတင်နေပါပြီ။ နောက်ပိုင်းစာချုပ်ဖို့လုပ်တာက ဘောင်ဝင်အောင်လုပ်တာပါ။ ၀န်ကြီးက အားလုံးကိုခေါ်ဆူပါတယ်။ တကယ်တော့အပြစ်ရှိသူကဘယ်သူလဲ။ ၀န်ကြီးနဲ့ GT က CE ၊ Dy-CE တွေမဟုတ်လား။ ခုတော့ ဘာမှမသိ ဘာအပြစ်မရှိတဲ့ ရာထူးငယ်တဲ့ကလေးတွေကို အဝေးကြီးကို ရွှေ့ဖို့လုပ်တာ တရားသလားဗျာ။ သူတို့က လူကြီးတွေလို လာဘ်မရပါဘူးဗျာ။ မိသားစုတွေ ခွဲပြီး အိုးခွဲ အိမ်ခွဲ နဲ့ လစာလေးနည်းနည်းလေးနဲ့ ဘယ်လိုရပ်တည်ကြမလဲဗျာ။ ကိုယ်ချင်းစာတရားလေးတော့ ရှိသင့်ပါတယ်။ ထင်ရာမြင်ရာနဲ့ထိုးချပြီး ကလေးတွေကို ဒီလိုမလုပ်သင့်ပါဘူးဗျာ။ သူတို့လူ သူတို့ကောင်မလေးတွေတော့ ရွှေ့တဲ့အထဲ ဘာလို့မထည့်လဲ။
သမာသမတ်ကျအောင်လုပ်ကြပါ။ သမ္မတကြီး ကြည့်မနေပါနဲ့။ လွှတ်တော်ကြီး ကြည့်လုပ်ကြပါအုံး။
အခု ဝန်ကြီးက သူ့ကိုဒီလို ပြောနေတာတွေကို ရှက်ရမ်းရမ်း၍ အောက်ကလူတွေ၊ ကုမ္ပဏီတွေကို ကြပ်နေပါသည်။ မှန်တာတွေ အပြောခံရတော့ အရမ်းနာကြည်းနေပါသည်။ အားလုံး ဒုက္ခရောက်နေကြရပါသည်။ ဒီကနေ့ ဖွဲစည်းလိုက်သည့် လာဘ်ပေးလဘ်ယူမှု အရေးယူဆောင်ရွက်ရေး ကော်မတီထံသို့ ဝန်ကြီး၏ လုပ်ရပ်များအား တိုင်ကြားကြပါစို့လား။
Great!we all agree with you to inform because everything mentioned above are completely true.
It's really funny to hear that you people are about to report to newly-formed Anti-Corruption Committee. I dare to say the minister Khin Mg Soe would not be punished anything for any of his wrong doing.
Please bare in all of your mind the new government is not for this job even though the popular president Thein Sein vows to fight against corruption as he said numerous times after forming the government. However unfortunately OR fortunately, against no one had been taken action for corruption charges.
They are there just to safeguard previous dictator Than Shwe and group. Later they will let take the power for whoever win 2015 election. If the new government show intention to take action against previous rulers, they haveasecret card: Minn Aung Hlaing.
They will simply stageacoup.
Forget about it, Khin Mg Soe will surely get away with his crimes as other.
1 MW Gas Engine ကလေး များကော comment ပေးကြပါဦးကွယ်။ နောက်ပြီး 25T/ESE ကို Z&A နဲ့ တို့အဘကြီး ဘယ်လိုဆော့ သလဲ ပေါ့လေ အဟီး...အမလေး သူတော်ကောင်း ကြီး တွေ ပါ ဟယ်။